welcome To Europenepali.com – Page 220 – News Portal From Europe
मदन भन्डारी पत्रकारिता पुरस्कार कोइरालालाई
युरोप नेपाली	 Apr 1, 2018
काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभागद्वारा स्थापित ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०७४’ यस वर्ष वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक कमल कोइरालालाई प्रदान गरिने निर्णय भएको छ । विभागको अाइतबार बसेको…
कति पैसा छ चीनिया फुटबल क्लबहरुसंग ? जो मेस्सी, रोनाल्डो र रोनी किन्न चाहन्छन
एजेन्सीहरु । पछिल्लो एक दशक रोनाल्डो र मेसीको वरिपरि विश्व फुटबल घुमेको छ । चिनियाँ क्लबहरू यिनै दुई खेलाडी किन्न तयार छन् । उनीहरू यसका लागि कीर्तिमान रकम तिर्न पनि तयार छन् । न त क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल म्याड्रिड छाड्नेछन् ।…
गैर आवासिय नेपाली संघ (NRNA) स्पेनको ताजा निर्णयहरु, मिडियाप्रति दुर्भावना
गैर आवासिय नेपाली संघ (NRNA) स्पेनको ताजा निर्णयहरु, मिडियाप्रति दुर्भावना मिती ३१ मार्च २०१८ शनिबारका दिन यस गैर आवासिय नेपाली संघ (NRNA) स्पेनका श्री चिन्तामणी सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको नियमित बैठक निम्नानुसार निर्णय गर्दै…
घले दम्पत्तिले एनआरएन प्राजेक्टको निरीक्षण गरे
काठमाडौ । घले दम्पत्तिले एनआरएन प्राजेक्टको निरीक्षण गरेपका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन ) का पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले आफनो कार्यकालमा शूरु भएका एनआरएनका प्रोजेक्टको निरीक्षण गरेका हुन । घलेले सोमबार लाप्राक पोजेक्टको निरीक्षण…
युरोप नेपाली	 Mar 30, 2018
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको निधन भएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पुष्टि गरेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका खड्का मृगौला…
नेपाली नयाँ बर्ष २०७५ को उपलक्ष्यमा पोर्चुगलमा महोत्सव आयोजना गरिने
लिस्बन, १६ चैत । युरोपेली मूलुक पोर्चुगलमा नेपाली महोत्सव हुने भएको छ । नेपाली नयाँ बर्ष २०७५ को अवसर पारेर गैर आवासीय नेपाली सँघ पोर्चुगलको आयोजनामा पहिलोपटक पोर्चुगलमा नेपाली महोत्सव हुने भएको हो । राजधानी लिस्बन स्थित मार्तिम मुनिज…
पोर्तुगलमा बुद्ध जयन्ती मनाउन मुल समारोह समिति र उपसमितिहरु गठन
आरके थापा, लिस्बोन, २९ मार्च । शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्धको २५६२औं जन्म जयन्ती ३० अप्रिल २०१८(तदानुसार बि. सं. २०७५ बैशाख १७ गते) का दिन यसपटक पनि पोर्तुगलमा भब्यरूपमा मनाउने तयारी शुरु भएको छ । आज नेपाली बाणिज्यदुतको कार्यालय…